Ireo tranonkala telo tsara indrindra hamoronana ny portfolio-tserasera | Famoronana an-tserasera
Ireo tranonkala telo tsara indrindra hamoronana portfolio -n'ny Internet
Raha te hampahafantatra ny tenanao ianao dia mila mamorona ny portfolio, fitambaran'ny asanao tsara indrindra. Antontan-taratasy io manan-danja Ho an'ny mpamorona sary rehetra dia hamela anao hampiseho ny fombanao sy ny traikefanao ary ny tetikasanao.
Mila mitandrina ny portfolio, mijery sary. Tadidio fa izany no ny voalohany inona no mahatonga ny sampana misahana ny maha-olona. Izy io dia ny fandaharam-pianarana vita fanaon'ny mpamorona sary.
Alao an-tsaina hoe ity portfolio ity dia navoaka tao amin'ny tambajotra, fa azon'ireo orinasa na mpanjifa mitady serivisy sary. Manana fahitana Ary ny fampahafantarana ny tenanao no lakilen'ny fahombiazana. Ny vahaolana dia ny portfolio amin'ny Internet.
Ho haintsika izany tranokala telo hamorona ny portfolio-nao amin'ny fomba hita maso, tsotra ary an-tserasera. Izany dia hiasa ho vita vita amin'ny fandaharam-pianarana, ka tsy maintsy hanao izany isika misafidy tetikasa mety amin'ny fampitana ny matihanina sy ny fampakarana ny firotsahan-kofidinao.
Sehatra iray izy io izay hanampy antsika amin'ny lalana roa. Voalohany indrindra, mety ho tsara izany loharano hanentanana antsika, mikaroha ary mampiofana ny maso amin'ny volavola an-tapitrisany. Etsy ankilany, azontsika atao ny mampiasa azy ho portfolio to asehoy ny asanay.
Behance dia vondrom-piarahamonina manana laza be dia be, izany mitsidika isan'andro ny olona an-tapitrisany manerantany.
Ny teboka matanjaka amin'ity sehatra ity dia izany mamela ny fampidinana rakitra amin'ny karazany rehetra, izany hoe afaka mampiditra sary, gifs, horonan-tsary, sns isika. Raha tsy misy fisalasalana, izy io dia iray amin'ireo soso-kevitra indrindra misy amin'izao fotoana izao eny an-tsena hahazoana sary maso.
Momba ny iray hafa fiarahamonina ho an'ny mpamorona. Maimaimpoana tanteraka ny fisoratana anarana, saingy azontsika atao ny manana serivisy sy tombony bebe kokoa amin'ny fandoavana sarany.
Izy io koa dia afaka manompo antsika loharanon'ny aingam-panahy. Rehefa misoratra anarana eo amin'ny lampihazo isika dia manome antsika fotoana hanarahana ireo mpiasa tsy miankina sy orinasa avy amin'ny sampana famolavolana samihafa.
Tokony hohamafisinay fa ny dribbble dia mamela antsika hamorona portfolio, saingy misy fizarana ao anaty menio hikarohana azy ihany koa job offers. Raha fintinina, manana birao fiasa izy na samy mpampiasa na orinasa mampiasa azy matihanina.
Ny serivisy lehibe an'ity sehatra ity dia ny fanomezana maimaimpoana ny portfolio amin'ny Internet. Tena mora ampiasaina ary manolotra lohahevitra ho anay mba hanomezana fikitika matihanina ny habaka misy anay. Misongadina amin'ny fisehoany manintona.
Misy mihoatra ny iray tapitrisa portfolio voasoratra anarana ary tetikasa mihoatra ny roa tapitrisa napetraka.
Manoro hevitra anao izahay hijerena tsirairay ny portfolio ary manapaha hevitra ho anao iza amin'ireo no mety indrindra amin'ny mombamomba anao. Raha manana fotoana sy faniriana ianao, ny fahatongavana amin'ny sehatra mihoatra ny iray dia hanome anao fahitana bebe kokoa, saingy mitandrema aza atao ambanin-javatra avy amin'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ireo tranonkala telo tsara indrindra hamoronana portfolio -n'ny Internet
Azo Beta maimaimpoana ho an'ny mpampanonta Affinity ankehitriny: Alternative tena izy amin'ny InDesign
Fikitika Retro amin'ireo logo fanta-daza amin'ny Internet